Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Eswatini Breaking News » Digniinta Safaaradda Mareykanka ee Eswatini: Hoy Joog!
Jebinta Wararka Caalamka • Eswatini Breaking News • Wararka Dowladda • Investments • News • Ammaanka • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Xaaladda Boqortooyada Eswatini ayaa weli kacsan laakiin waxay umuuqataa inay ku hoos jirto gacanta dowladda, iyadoo loo maleynayo inay kacdoon wadayaashu ka howlgalayaan dalka.
Diyaaradda Eswatini iyo shirkadda ay wada shaqeeyaan ee Airlink, oo ah shirkad fadhigeedu yahay Koonfur Afrika oo ah shirkad duulimaad oo maxalli iyo gobolba leh, ayaa baajisay duulimaadyadii maanta u dhexeeyay Johannesburg iyo Sikhuphe's King Mswati III International Airport ee Eswatini, sababo la xiriira qalalaase sokeeye oo ka dhacay Boqortooyada Eswatini.
rasmiga ah ee dawladda ayaa sheegay in eTurboNews: "Waxaan aaminsan nahay waxaa jira xoogaga haatan ee dalka."
Sida laga soo xigtay ilo ETN, ma jiraan koob ee wargeyska maanta ay sabab u tahay kacdoonada ka qarxay magaalada caasimadda ah ee Mbabane shalay. Idaacadaha Qaranka ayaa ku celcelinaya warkii shalay, waxaana xalay hakad galay internet-ka.
Xaaladda Eswatini weli kacsan ka dib markii habeenkii ah la bandow meel.
eTurboNews maqaal ku saabsan Eswatini oo lagu qabtay inta u dhexeysa Taiwan iyo Shiinaha background soo koobay ku saabsan horumarinta this socda. Waxa laga yaabaa inay fikrad ka bixiso in xaaladdani ay ka sii badnaan karto muwaadiniinta careysan ee dalbanaya isbeddel
Sida laga soo xigtay warbixin ka soo Eswatini, dibad xidhay hoos ku Times of wargeyska Eswatini taageerada ay boqorka iyo dowladda. waxaa Eswatini Cabitaanka, kabista ah SABMiller ABinBev meesha King Mswati leh saamiyada gubay by dibad.
“Anagoo daneyneyna amniga iyo amniga macaamiisheenna iyo shaqaalaheena, isla markaana la tashanayna lamaanaheena Airlink, waxaan go’aansanay inaan si ku meel gaar ah u joojino howlaheena wadada isku xirta Johannesburg iyo Sikhuphe (Eswatini). Waxaan sii wadi doonaa si ay u qiimeeyaan xaaladda oo aan soo celin doonaa adeegyada caadiga ah sida ugu dhakhsaha badan ay ammaan tahay in sidaas la sameeyo, "ayuu yiri Eswatini Airlink Maareeyaha Guud, Joseph Dlamini.
Duulimaadyada la joojiyay (30 June 2021) waa:
Masuuliyiinta dalka ayaa xalay amar ku soo rogay bandow adag waxayna xireen internetka. Communications la dunida ka baxsan waxaa ku koobnayn. Waxay umuuqataa inay hada soo laabatay. Ilo ayaa u sheegay eTurboNews: "The warar aad halkan ku arki ma aha sawir buuxa."
Sida ay sheegayaan warbixino aan la xaqiijin oo ay soo saartay shabakada wararka ee madaxa banaan ee Koonfur Afrika ee IOL shaqaalihii baska ayaa shakiyey waxayna fureen baaldi ay ku jiraan miraha Nyii (miro duurjoog ah oo ka soo baxay geedka casaanka ah ee loo yaqaan 'Ivorywood), iyagoo ka helay walxaha qarxa hoostiisa. miraha ayaa la saaray baska by Gabar 13 sano ah.
Safaaradda Mareykanka waxay kula talineysaa dhammaan muwaadiniinta Mareykanka inay ka digtoonaadaan qalalaasaha shacabka ee Boqortooyada. Xaalad ayaa ka socota Eswatini, oo ay ku jiraan gubashada iyo bililiqaysiga baqaarada, gawaarida iyo meheradaha. Dibadbaxyada ayaa ka socda Mbabane subaxnimadii oo dhan dukaammaduna way xirmayaan. Safaarada Mareykanka waxay si xoogan ugu boorineysaa dhamaan muwaadiniinta, wadanka oo dhan, inay keydiyaan cuntada iyo biyaha ka dibna ay guryahooda iska joogaan Shaqaalaha safaaradda ayaa lagu faray inay guryahooda sii joogaan. muwaadiniinta Maraykanka ayaa loogu baaqay in ay ka fogaadaan waddooyinka waaweyn sida dibad waxaa ka xanibeen ilaha wax gubanaya. Safaarada Mareykanka ayaa ku sii jiri doona u xiran yihiin iyada oo Wednesday, muwaadiniinta June 30 US u baahan adeegyada degdegga ah waa in ay wacaan Section qunsuliyadda ah.
Safaaradda Mareykanka waxay kula talinaysaa muwaadin Mareykan ah Eswatini inuu qaado talaabooyinka soo socda:
Haddii ay badbaado tahay, kaydso raashinka iyo biyaha ka dibna guriga joog.
La soco warbaahinta gudaha wixii ku soo kordha.
Ka fogow driving